★မြန်မာ့အလင်း★: ခရစ်ယာန်တွေကို ဒီလိုမီးရှို့သတ်တာ မိုဟာမက်ရဲ့ ဆုံးမချက်နဲ့ ကိုက်ညီပေ၏
ခရစ်ယာန်တွေကို ဒီလိုမီးရှို့သတ်တာ မိုဟာမက်ရဲ့ ဆုံးမချက်နဲ့ ကိုက်ညီပေ၏
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:11 AM
အခုဘဝမှာတောင် မင်းသိပ်ချစ်တဲ.မြန်မာပြည်မှာနေခွင်.မ၇ ဘဲ မလေး၇ှား(ကုလားနိုင်ငံ) မှာ ကုလားလီးတကာလည်စုတ် ကုလားကျွန်လုပ်ပြီး မလေး၇ှားနိုင်ငံUNHCRေ၇ှ.မှာ ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုမကောင်းပြောပြီး ကျွန်တော်.ကိုကယ်ပါ ကျွန်တော်.ကိုကယ်ပါဆိုပြီး သူတောင်းစားလက်မှတ်တောင်း
သူတောင်းစားလက်မှတ်လဲ၇ေ၇ာ IOMအိတ်လေးကိုင်ပြီး လေယာဉ်ကွင်းမှာ သူများနောက်ကျ ကုတ်ကုတ်လေးလိုက် ဟားဟား အခုလဲကုလားကိုကျွန်ခံလို.မဝလို. ကုလားဖြူကျွန်လုပ်နေပြန်ပြီမလား
မလေး၇ှားနိုင်ငံအကြောင်းကို မင်းဖင်ပိတ်ငြင်းမနေနဲ. မင်းထိုင်၇ှိခိုးခဲ.တဲ. မလေး၇ှားဝန်ကြီးက မူဆလင်ကွ
မလေး၇ှားတို.စင်ကာပုတို.မှာကျွန်ခံနေကျတဲ.မင်းတို.ဗမာမတွေလေ သူတို.က ၇ု၇ှားမှာကျောင်းတက်နေတဲ.စစ်သားတွေဆီကိူ ကိုယ်.စ၇ိတ်နဲ.သွားပြီး ဖင်လဲခံ ပိုက်ဆံလဲပေး အန်းကုန်းပေါ.ကွာ အဲ.လိုလုပ်နေကြတာကိုမင်းသိလား
ဘာလဲ မင်းနှမတွေက "တပ်မတော်ကြီးကိုအံအား၇ှိဖို.အ၇ာ၇ာမှာကူညီ "ဆိုတာမျိုးလား မင်းနှမတွေကိုမေးကြည်.လိုက်လေ
မကြာခင်မှာ မင်းခေါင်းမှာယပ်တောင်လေးထိုး လည်ပင်းမှာလဲ ခွက်တွေဆွဲပြီး လမ်းမပေါ်မှာ
ကိုမေကိုလိုး ခွေးမသားကုလားတွေ အကုန်လီးပဲ
မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ စောက်ကုလားတွေလုပ်ကြတယ်။ ဒါက ဘင်္ဂလ...
သေနတ်ကိုင်ပြီးငိုတယ်. . . . ပြီးတော့ ကုလားအချင်းခ...
မွတ်ဆလင်တွေဟာ သူတို့အချင်းချင်း ဒီလိုလုပ်ကြတယ်
ကျွန်ကုလားကို အနိုင်ကျင့်ရတာ မျက်နှာပူနေရင် ဒီဗီဒီ...
ခရစ်ယာန်တွေကို ဒီလိုမီးရှို့သတ်တာ မိုဟာမက်ရဲ့ ဆုံး...
ကုလားတွေ ခွေးလို ၀က်လို သေကြပြန်ပြီ : Many killed ...
Wiki-Leaks and plausible lies - Where have all the...
MORE Drills! South Korea & US are at it AGAIN.
PayPal Restricts WikiLeaks Account! Boycott PayPal...
Spiralling out of Control: The Risk ofaNew Korea...
Threatening North Korea: US and Japan to conduct m...
Escalation in the Korean Peninsula? US and South K...
Harper advisor calls for assassination of Wikileak...
မြန်မာအချင်းချင်း ရန်သူလိုသဘောထားပြီး ပထွေးရှာနေတဲ...